Impi ngenxanxathela yezitolo eyakhiwa emathuneni | Scrolla Izindaba
Impi ngenxanxathela yezitolo eyakhiwa emathuneni
Umndeni wase-Marite e-Bushbuckridge ulwe iminyaka engu-12 ukuze kumiswe ukwakhiwa kwenxanxathela yezitolo ebiza u-R200 million.
Lokhu kungenxa yokuthi le nxanxathela yezitolo izokwakhiwa lapho okukhona amathuna ezihlobo zawo futhi umndeni uyenqaba ukuthi ambiwe ukuze azongcwatshwa kabusha kwenye indawo.
Lo mndeni walahlekelwa indlu yawo ngonyaka ka-2018 ngemuva kokuba yashiswa amalungu omphakathi, nakuba kunjalo lo emndeni umile esinqumeni sawo sokungawasusi amathuna.
Okhulumela umndeni uSipho Manzini uthe basuka e-Marite.
“Umndeni wethu usale dengwane ngemuva kokushiswa komuzi wethu ngumphakathi futhi kuyacaca ukuthi lokhu kuthinta abantu abanegunya. Kwadingeka ukuthi sihambe njengoba sasisabela impilo yethu.”
UManzini uthe ngokwezinkolelo zabo akuvumelekile ukumbiwa kwamathuna ayiswe kwenye indawo.
Nokho iNduna uMathupha Mokoena woMkhandlu Wesizwe SakwaMathibela uthe ukwakhiwa kwenxanxathela yezitolo kuzoqala maduze nje phezu kwezinkinga zomndeni wakwaManzini.
“UMnyango wezoLimo, ukuBuyekezwa koMhlaba nokuThuthukiswa kweziNdawo zaseMakhaya uzokwenza kube lula ukuxoxisana nomndeni wakwaManzini nakuba phambilini wenqaba ukwamukela isinxephezelo nokusayina amaphepha azogunyaza ukuthi kugujwe amathuna.”
Ohlola umhlaba uNorah Fakude uthe sebemi ngomumo ukuthi kwakhiwe, kodwa bazolinda ukugunyazwa uMnyango.
Uthe lolu hlelo luzodala amathuba omsebenzi angu-800 endaweni.
Ilungu lomphakathi lase-Marite lithe umndeni wakwaManzini ubancisha ithuba lokuqashwa nokuthuthukiswa komphakathi onhlwempu.
“Lokhu abakwenzayo bazicabangela bona bodwa,” kusho ilungu lomphakathi ekubeni “lokhu kwaholela ekutheni amalungu omphakathi adinwe ashise umuzi wabo, kodwa namanje abavumi nendawo yabo.
Siyayidinga imisebenzi ukuze sizinakekele njengoba isibonelelo sikahulumeni sika-R350 singenele.”